Shiinaha Biyuhu iyo cimri dhererkooda warshad waraaqo synthetic iyo alaab-qeybiyeyaal ah Shawei
Biyuhu iyo cimri dherer warqad dardaro PP
Daabacaadda: dusha sare ee badeecaddu waa hagaagsan tahay oo siman tahay, qaabdhismeedkuna waa mid xarrago leh. Waxqabadka daabacaadda ee waraaqda macmalka ah waa mid aad u fiican oo fiiqan, taas oo aan la barbardhigi karin tan waraaqaha caadiga ah. Waxaa loo isticmaali karaa boodhadh, xayeysiis, buugaag iyo alaabo kale oo leh baahiyo tayo sare leh.
Waxqabadka daabacaadda: warqadda synthetic, ka shaqeysigeedu waa mid aad u wanaagsan, marka la eego daabacaadda, ha ahaato inkin, qalajin, adhesion waa mid aad u wanaagsan. Khad guud ayaa loo isticmaali karaa. Marka lagu daro lithography, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa gargaarka, xajmiga iyo daabacaadda shaashadda.
Waxqabadka wanaagsan ee qoraalka: iyadoo ay ugu wacan tahay daloolada yaryar ee khaaska ah ee loogu talagalay dusha sare, qoraalku waa siman yahay qaabkiisuna waa siman yahay, kaas oo beddeli kara buugaagta waraaqaha, buugaagta iyo xilliyeedyada loogu talagalay qorista guud.
Hantida adag ee biyuhu galaan: Waraaqda PP-ga ee loo yaqaan 'synthetic paper' waxay leedahay hanti dhammaystiran oo biyuhu xiraan, taasoo ka fogaan karta hawlgalka alaabada guud ee waraaqaha ah ee u baahan dib-u-celinta filimka difaaca; Badeecadani ma aha oo keliya biyo-diid iyo qoyaan-caddayn, laakiin sidoo kale waxay leedahay dusha sare iyo dusha sare ee filimka warqadda ah. Waxaa loo isticmaali karaa daboolka buugga, boodhadhka bannaanka, xayeysiinta, calaamadda aan biyuhu ka soo bixin, calaamadda ubaxa, kaarka iyo wixii la mid ah. Waa wax qurux badan, waaraya oo keydin kara qarashka filimka.
Wax soo saarku waa qoyaan-caddeyn, u adkaysanaya qallooca iyo leexashada, ma fududa in la qaabeeyo, ma fududa in jaalle la beddelo iyo wixii la mid ah. Badeecadaha u baahan in la keydiyo muddo dheer, sida buugaagta, boodhadhka iyo buugaagta tixraaca iyo buugaagta loo baahan yahay in si joogto ah loo akhriyo, sida buugaagta dharka, buugaagta alaabta lagu qaato, dalbashada iyo gogosha cuntada, muddo dheer ayaa la isticmaali karaa waqti iyo waa dhaqaale.
Baraf (muraayad) warqad macmal ah oo naxaas ah (BCP / BCA)
Isticmaal: khariidad, daboolka buugga, buugga, kalandarka, kalandarka billaha ah, sumadda, boorsada gacanta, daabacaadda xayeysiinta, iwm.
Dhumucdiisuna: 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm
Warqad warqad synthetic ah (BCC)
Isticmaala: taageere, sabuurad, rooga cuntada, daboolka albumka, daboolka buuga, saacadda budada budada ah, qalabka waxbarida carruurta, calaamadaha, sanduuqa baakadaha, hangtag, paipaipai.
Dhumucdiisuna: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm